I-Hangzhou Jiande Enterprise ngokungxamisekileyo ibuyise abasebenzi abangaphezulu kwe-100, baphinda-phinda kathathu umvuzo wabo ukukhuthaza ixesha elongezelelweyo ukwenza iimaski! Ngokuqhambuka kwenyumoniya entsha ye-coronavirus eWuhan, ukuveliswa kweemaski kuye kwaba yinto exhalabisa uluntu. Njengoko ishishini phambili t ...
UZhou Jiangyong waya kumenzi wesigqubuthelo se-Jiande ukwenza uphononongo
Emva kwemini kaJanuwari 27, uZhou Jiangyong, ilungu leKomiti eSisigxina yeKomiti yePhathi yePhondo kunye noNobhala weKomiti yeQela likaMasipala waseHangzhou, waya eChaomei Daily Chemical Co., Ltd. (umenzi wemveliso yokukhusela ubhubhane) ukuphanda. Ucacisile ukuba i ...
Okwangoku, umlo welizwe lonke wokulwa nenyumoniya ebangelwe yinoveli coronavirus. Njengomgca "wokuqala wokuzikhusela" wokukhusela ucoceko lomntu, kubaluleke kakhulu ukunxiba iimaski ezihlangabezana nemigangatho yokuthintela ubhubhane. Ukusuka kwi-N95, i-KN95 ukuya kwizigqubuthelo zonyango, p ...